Akara Ivan Van Sertima nyere ntughari maka akụkọ ihe mere eme nke mmadụ - Afrikhepri Fondation
Tuesday, Mee 11, 2021
Ebe ndi Africa no na oge ochie
Ivan Van Sertima nyere ya maka idegharị akụkọ ihe mere eme nke mmadụ
Na-agụ: 2 mins
IVan Van sertima onye amuru na Guyana, bu onye amaala nnoo ndi mmadu na - akwanyere ugwu nke Mahadum Rutgers nke mere ezigbo ala ọma jijiji n’afọ 1977 site na mbipụta nke akwukwo ha biara n’ihu Colombus: the African Presence in Ancient America (Ha rutere tupu Columbus: ọnụnọ Afirika n’obodo Amerika).
A ga-ebipụta akwụkwọ a n'asụsụ French na 1981 Site na 1957 ruo 1959, ọ rụrụ ọrụ na ụlọ obibi akwụkwọ na Guyana. N’afọ ndị 60, ọ gara ọtụtụ njem n’agbata England, Africa na Caribbean. Okwuputala otutu akwukwo akwukwo Caribbean, na otutu nyocha nke edeputara na mba di iche iche (Denmark, India, England na United States). Van Sertima bidoro ọrụ ya na 1970 mgbe ọ chọtara ịdị adị nke mmetụta dị n'Africa n'asụsụ nke ọtụtụ ndị pre-Columbian nke Central na South America. N'ịgbaso nyocha nke myirịta ndị a na ọmụmụ ihe yiri nke a Site na saịtị ihe omimi ochie, o ruru otu nkwubi okwu ahụ dika nke na-eme ka ndi mmadu na-eme ihe omimi, na-agbasawanye mgbe nile: ndị njem ojii na ndị nyocha si Africa chọpụtara America. Njem ha bụ ma ọ bụ na mberede ma ọ bụ na-eme atụmatụ, ebumnuche nke ikpeazụ bụ ịzụlite ọlaọcha na ọla nchara ndị America. Ihe omuma nke oji a juputara na Mexico.
Maka Van Sertima, ma e wezụga njirimara agbụrụ nke ọtụtụ nnọchi ojii dị na ebe ahụ, akara na ntutu isi bụkwa Africa, enweghị obi abụọ. Kọmitii Nobel nke Swedish Academy nyere ọrụ ya, nke a họpụtara maka Nrite Nobel na Akwụkwọ n'etiti 1976 na 1980. Ndị International Commission for the Scientific and Historical Rewriting nke History of History nyere ya. UNESCO Mmadu.
Na 1967, ọ rụrụ ọrụ na Tanzania wee dezie akwụkwọ ọkọwa okwu Swahili. Onye prọfesọ na Mahadum Rutgers, ọ na-enyekwa nkuzi na Mahadum Princeton na mgbakwunye na ịbụ onye nchịkọta akụkọ nke "Journal of African Civilizations" nke ọ tọrọ ntọala kemgbe 1979 nke ọ na-eme ka nchọpụta pụta ìhè na anthropological na mmepe nke ọtụtụ omenala gụnyere sayensị na ụwa ojii, ụmụ nwanyị ojii n'oge ochie, Egypt gaghachiri, ụmụ Africa, mmepeanya nke ndagwurugwu Naịl, ọnụnọ Africa site na nka na America , ọnụnọ Africa dị n'Eshia, Europe na America, nnukwu ndị na-eche echiche n'Africa, nnukwu ndị isi ojii: oge ​​ochie, nke etiti na nke ọla edo nke ndị Moors. Prọfesọ Ivan Van Sertima isonye na ọtụtụ nzukọ na ihe karịrị otu narị mahadum gburugburu ụwa. A maara ọrụ ya magburu onwe ya gburugburu ụwa.
7 ọhụrụ site na .17,45 XNUMX
1 ejiri site na € 23,59
Zụta € 17,45
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 10, 2021 10:05
Soro Chineke kwurịta okwu
Ihe nlele 75% nke mmiri ozuzo na ikuku dị mma maka Monsanto Roundup
Queen Pokou: Onye guzobere ndị Baoulé
Inweta nnwere onwe ego - Robert Kiyosaki (Audio)